MW Qoorqoor oo dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
MW Qoorqoor oo dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb
Madaxweynaha Dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qooqoor, ayaa maanta dib ugu laabtay xurunta maamulka ee Dhuusamareb.
DHUUSAMREEB, Soomaaliya – Madaxweynaha Dowaladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Dhusamareb kadib safar waqti dheer qaatay oo uu ku joogay Caasimadda dalka ee Muqdisho.
Diyaarad galinkii danbe ee maanta ka duushay garoonka Aadan Cadde ayaa Qoorqoor iyo waftigiisa ka dejeisay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Nuur , waxaana soo dhaweeyay Guddoomiye Ku xigeenka Baarlamanka Galmudug Cabdullahi Xirsi, qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada galmudug, Maamulka Caasimadda iyo masuuliyiin kale.
Manaxweynaha Galmudug intii uu ku suganaa Muqdisho, wuxuu ka qeyb galay shirar muhiim ah oo xal loogu raadinayay xaaladaha siyaasadeed ee dalka.
Wakiilada Beesha Caalamka ee jooga Soomaaliya, Midowga Musharixiinata, qeyb ka mid ah ururada bulshada rayidka ee ka jira dalka iyo kulamo kale oo gaar-gaar ah ayuu ku yeeshay Muqdisho, ka hor inta uusan maanta ambabixin.
Qoorqoor, ayaa lagu eedeeyaa inuu qeyb ka yahay dib u dhacyada doorashooyinka dalka, kuwaas oo Farmaajo, ku fashilmay inuu ku qabto waqtigoodi, isagaa taas kala kaashaday shaqsiyaad uu ka mid yahay Madaxweynaha Galmudug oo garab u ahaa muddo dheer.